Ikhaya » Izindaba Zamuva » Okuthunyelwe izivakashi » Ungayithola Kanjani Idigri Yakho Njenge-Digital Nomad
Ukuhamba umhlaba, usebenza kusuka kwi-laptop yakho, nokuthola iziqu zakho kungenziwa ngokuncane kakhulu kunalokho ucabanga.
Isiko lokuzulazula kwidijithali livuse iphupho ezigidini zezinhliziyo zabantu ukuqeda isimo esikhona manje nokuzenzela izindlela zabo empilweni.
Mhlawumbe ufuna ukufundisa isiNgisi eChina noma usebenze ngaphansi kwelanga eBali.
Noma ngabe ukuphi lapho uya khona, akudingeki ukhethe phakathi kokuhamba nokwakha umsebenzi. Eqinisweni, laba bobabili bangahlala kalula ngokuvumelana futhi bakusize ufeze indlela yakho yokuphila kalula.
Uma unentshisekelo yokufunda ungaba kanjani umhambuma wedijithali ngenkathi usesesikoleni, funda uqhubeke.
Khetha idigri enamathuba emsebenzini okude
Uma ufuna ukuba ngumhambuma wedijithali, lapho-ke kuzodingeka ukhethe okukhulu okuzokunikeza amathuba okuzivumelanisa nezimo omsebenzi. Esikhundleni sokukhetha inkambu ezokubophela emsebenzini wehhovisi eminyakeni engama-40 ezayo, cabanga ngezimboni eziningi ezenzelwe idigital. Ungangena ezinhlelweni, ukwakhiwa kwewebhu, ukumaketha kwedijithali noma ukubhala. Ungaze uthole iziqu zakho kwezemfundo ukukhulisa ubuqiniso bakho bokufundisa isiNgisi phesheya.
Kunezinhlelo eziningi ze-inthanethi eziguquguqukayo ezizokusiza ukuthi uhlale esikoleni ngenkathi usohambweni. Ungafaka isicelo se- imalimboleko yabafundi yangasese ukuthola imali yokufunda kanye nezinye izindleko. Ingxenye enhle kakhulu mayelana nemalimboleko yangasese ukuthi unenkululeko ethe xaxa yokuthi uyisebenzisa kanjani imali oyibolekayo. Kukhona namathuba amaningi wokuhlelwa kokukhokha ongawasebenzisa ngemuva kokuphothula iziqu.
Kuzofanele ugcine izinyawo zakho phansi njengoba amaphupho akho ngokuhlala phesheya ebaleka. Impilo yaphesheya kwezilwandle ingaba nzima, futhi kunezinselelo eziningi zansuku zonke ozodinga ukuzinqoba njengowezizwe. Kusuka kuzithiyo zolimi kumazinga wokuguqulwa kwemali, kunezinto eziningi ozodinga ukuzenza ngaphezulu komsebenzi nesikole. Kuzofanele ugcwalise izidingo ze-visa zezindawo zakho zokuvakasha. Indlela elula yokungena emazweni amaningi isesitshudeni noma i-visa yokusebenza. Lokhu kungaba ngokufundisa isiNgisi, ukuba yi-au pair noma ukubhalisela izifundo esikoleni solimi ngenkathi uthola imfundo yakho yasekolishi online.
Ungahle uthande ukuhamba ngokukhululeka futhi uphile nomaphi lapho impilo ikuyisa khona, kepha lokho kungakufikisa kuze kube manje. Ungaba nenkululeko ethe xaxa njenge-nomad yedijithali, kepha kusadingeka ube nezinhloso ezicacile ngekusasa lakho. Esinye sezizathu ezinkulu ukuthi ngemuva kokuthi ukuzulazula kokuqala kuqale ukuncipha, uzozithola ukhumbula ekhaya noma uzizwa ungaqondile. Ngaphandle kokwazi ukuthi ufuna ukuyaphi, kungaba nzima ukuhlala uvikelekile ngokwezezimali.
Ama-visa aphelelwa yisikhathi, futhi umuntu ofuna ukuhlala emazweni amaningi kuzofanela achithe isikhathi ezweni lakubo phakathi kwama-visa. Uzohlala kuphi okwesikhashana? Yini ozoyenza uma ufuna ukubeka phansi izimpande? Ingabe uyazi indlela yokuvikela ikhaya lakho ngenkathi usohambweni? Ngabe umgomo wakho wokugcina ukuthola ubuzwe kwelinye izwe noma ukubuyela ekhaya kaninginingi phakathi kohambo? Njengoba ukwazi ukubona, lokhu kudinga ukuhlela okucabangayo noma ngabe uyaphi noma ufundani.